Miantefa amin’ny mpianatra 330 000 : tsy ampy vola ny fizarana sakafo an-tsekoly | NewsMada
Miantefa amin’ny mpianatra 330 000 : tsy ampy vola ny fizarana sakafo an-tsekoly
Tojo olana amin’ny vola entina mihodina ankehitriny ny fizarana sakafo an-tsekoly. Hanao ezaka ny minisiteran’ny Fanabeazana hitady mpiray ombon’antoka hanampy amin’ny famatsiana ny tetikasa ho an’ny taom-pianarana vaovao 2018-2019.
Nomarihina tao amin’ny EPP Beabo (Ambovombe) ny Andro afrikanina ho an’ny sakafo zaraina any an-tsekoly, ny faran’ny herinandro lasa teo. 20 ny sekoly nampiharana ny tetikasa iarahan’ny Pam, Fida-Aropa, FAO momba ny famatsiana ny toeram-pisakafoana amin’ny vokatra eo an-toerana ihany. Tohanana hanana asa hitondra fidiram-bola hafa ny ray aman-drenin’ny mpianatra ka entina hamatsiana ny toeram-pisakafoana ny vokatra azo avy amin’ny voly anana sy legioma, hazo fihinam-boa, fiompiana trondro… Manampy ny akora ampiasaina amin’ny sakafon’ny mpianatra ny vokatra miakatra rehetra hanovaovana izany. Tsy atao manalavitra ny sekoly rahateo ny fiompiana na fambolena ka azon’ny mpianatra hakana fahalalana tsotsotra. « Sady famatsiana ny tahirin-tsakafo any an-tsekoly no manampy ny fidiram-bolan’ny ray aman-dreny ny tetikasa », hoy ny solontenan’ny Pam eto amintsika, Moumini Ouadraogo.
Fomba iray hitazonana ny mpianatra any an-dakilasy ny fizarana sakafo any am-pianarana isan’andro araka ny fanadihadiana efa natao. Manatsara ny vokatra amin’ny taham-pahafahana fanadinana ny fisian’ny tohana ary mampivelatra ny sain’ireo ankizy. 331 420 (amin’ny sekoly 2 865) ny isan’ny mpianatra misitraka ny sakafo an-tsekoly amin’ny fandaharanasan’ny minisiteran’ny Fanabeazana. Tohanan’ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (Pam) ny 290 000 amin’ireo. Ankizy any amin’ny faritra telo any Atsimo ary eto Antananarivo, Toliara ary Toamasina no misitraka ny tohana entin’ny Pam.